Tallaabooyin Heer Sare ah Si Loo Yeelo Baaskiilada Fahamka & Ndash; Khabiirka Cirka
Tallaabooyin Heer Sare ah Si Loo Yeelo Baaskiilada Fahamka - Khabiirka Cirka
Khabiirka botnet wuxuu u taagan yahay isku-xirka robot. Waxaa lagu qeexi karaa shabakada kombuyuutarka oo uu ku dhacay fayras loo yaqaano "Malware" ama uu ku hoos jiro xakamaynta barkada. Kombuyuutar kasta oo lagu xakameynayo barkada-caarada waxaa loo yaqaanaa bot. Weerarkani wuxuu awood u leeyahay inuu u diro amarro kombuyuutarka kombiyuutarka si loo fuliyo ficilo waxyeello leh
Michael Brown, oo ah Semt Maamulaha Maareynta Macaamiisha, wuxuu sharxayaa in qofka weerarka geystay uu fulin karo ficilada dambi-ku-oogayaasha iyadoo ku xiran cutubyada ama qiyaasta qoryaha ee weeraray shabakadda kombiyuutarada - automated paper dispenser. Kootaroolayaashu waxay karti u leeyihiin inay sameeyaan hawlo khatar badan oo aan la gaari karin cayayaanka. Marka botnets galaan shabakada kombiyuutarka, waxay ku sii jiri karaan nidaamka waxaana lagu xakameyn karaa weerarka fog. Habkani sida kumbiyuutarrada cudurka qaba waxay heli karaan cusbooneysiin kuwaas oo ka dhigaya inay bedelaan dhaqankooda si dhakhso ah.
Qaar ka mid ah ficillada ay sameeyeen botnets waxaa ka mid ah:
Inta badan shakhsiyaadku waxay iska indho-tiraan arrintan tan iyo markii ay dareemayaan in emailku horey u noqday mawduuc horay loo weeraray. Si kastaba ha noqotee, botnets spam waa cufan weyn oo weerari kartaa meel kasta. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo diro spam ama fariimo been abuur ah oo ay ka mid yihiin nacfiyada ku jirta tiro badan oo ka socota botnet kasta..Tusaale ahaan, botnet Cutwail wuxuu awood u leeyahay inuu diro 74 bilyan farriimo maalin kasta. Tani waxay u oggolaaneysaa in qotodheerta ay faafiyaan saameeynta kumbuyuutarrada badan iyo maalinba.
Awoodaha ayaa ah tiro aad u weyn oo ka mid ah khabiirka botnet oo ka caawinaya in ay ku kordhiyaan shabakad la isku hayo oo leh codsiyo badan oo ka dhigaysa mid aan macquul ahayn in ay isticmaalaan dadka isticmaala. Qofku wuxuu u baahnaan doonaa inuu bixiyo lacagta kombiyuutarka, iyo tan badanaa waxay u dhacdaa ururada ujeeddooyinka shakhsiyadeed ama siyaasadeed sidaas daraadeed waxay diidaan inay helaan macluumaad muhiim ah, waxayna ku dhamaan doonaan bixinta kaliya si ay u joojiyaan weerarka.
Boondhooyinkan waxaa loogu talagalay inay lacag ka qaataan kaararka deynta iyo shirkadaha. Tan waxaa lagu gaari karaa adoo xadidaya macluumaadka kaararka aqoonsiga. Kuwaas waxaa ka mid ah ZeuS botnet oo loo isticmaalay in lagu caawiyo malaayiin lacag oo laga helo shirkado badan.
Dulmiga loola jeeday
Boorsooyinkani waxay ku yar yihiin qiyaasta waxayna ku habboon yihiin in ay caawiyaan kuwa weerarka ka geysta ururada waxayna ka helaan macluumaad qarsoodi ah. Tallaabooyinkani waxay halis u yihiin hay'adaha markay bartilmaameedsanayaan xogta qarsoodiga ah iyo qiimaha leh, oo ay ka mid yihiin cilmi baaris, macluumaad dhaqaale, macluumaadka shakhsiyeed ee macaamiisha iyo hantida cilmiga
Weeraradaan waxaa la sameeyaa marka barkodu uu xakameeyo khadadka si loo xakameeyo serverka isticmaalka emails, faylka la wadaago, iyo sharciyada kale ee codsiga warbaahinta bulshada ama isticmaalka qoryaha kale si ay u dhaqmaan sida dhexdhexaad ah. Marka isticmaalaha kumbuyuutarka uu furo feylka xun, dhejinta waxay u dirtaa warbixinno amar ah oo u oggolaanaya inuu baaskiilka qaato oo sameeyo amarro kombuyuutarku saameeyey.
Boorashadu waxay noqdeen khatar cyber ah sida ay u kakooban yihiin marka la barbardhigo fayrasyada kale ee kombiyuutarada, kuwani waxay si weyn u saameynayaan dawladaha, shirkadaha, iyo shakhsiga. Botnets waxay kantarooli karaan shabakadaha waxayna helayaan awood, waxayna u horseedi karaan khasaare ballaadhan iyagoo u adeegsanaya inay yihiin khabiiro gudaha ah oo karti u leh inay fuliyaan tallaabooyin aan fiicnayn oo sidaas u burburiya urur.